Gochaa sukkanneessaa qaama adda hin baanen raawwatame jedhame qarachaan jira – poolisii – Fana Broadcasting Corporate
Gochaa sukkanneessaa qaama adda hin baanen raawwatame jedhame qarachaan jira – poolisii
Finfinnee, Fulbaana 9, 2012 (FBC) – Poolisiin gochaa sukkanneessaa yeroof qaama adda hin baanen raawwatame jedhamerratti qorannaa gaggeessaa jira jedhame.
Tibbana gochaa sukkanneessaa raawwatame jedhamuun miidiyaa hawaasaarratti naanna’aa jiru qoradhee tarkaanfii seeraa nan fudha jedhe Koomiishiniin Poolisii Oromiyaa.
Koomiishinichi dhimma kana ilaalchisuun miidiyaaledhaaf ibsa kenneera.
Itti gaaftamaan Waajjira Koomiishinii Koomiishinar Jeneraalaa Komaandar Taayyee Girmaa ibsa har’a waaree booda kennaniin Poolisiin Oromiyaa nagaa ummata naannichaa mirkaneessuun ummanni yaaddoo nageenyaa tokko malee hojii hawaas-diinagdeesaa akka hojjetu ergama ummattummaa qabatee soch’aa jira jedhan.
Poolisiin naannichaa waggoota lameen darbaniin dura dararaa fi gochaa sukkanneessaa ummaticharratti raawwatamaa ture hanbisuun ummatasaaf gaachana ta’ee maqaa gaarii gonfachaa dhufeera.
Ammas jijjiiramni wareegama qaaliin dhufe kun akka lafa qabutu ummataan waliin ta’ee hojjechaa jira jedhaniiru.
Karaa kamiinuu gochi jijjiirama kana gufachiisu akka hin raawwatamne aantummaa ummataa kaleessa agrsiise san cimsee kan itti fufu ta’a.
Faallaa kanaatin suuraa guyyaa kaleessaatii eegalee miidiyaa hawaasaarra naanna’aa jiru waliin wal qabatee, maqaan Poolisii Oromiyaa ka’aa jira.
Suuraan naanna’aa jiru kun gochaa dhala namaarratti hojjetamuu hin qabnee fi yakka olaanaadha jedhaniiru.
Gochi kun eenyuun akka raawwwatame hanga ammaatti adda bahuu baatus koomiishinichi qaamolee nageenyaa biroo waliin ta’ee qorachuun seeratti dhiheessuuf hojii jalqabeera.
Eenyuus ta’ee eenyu qaama gocha kana raawwate qoratee yeroo dhihoo keessatti ifa taasisa.
Hangasittuu ragaa qabatamaa ta’een osoo hin qulqullaa’in maqa gurraachessiin miidiyaa hawaasaatiin ummata burjaajessuuf raawwatamaa jiru dhaabbachuu akka qabu koomaandarichi hubachiisaniiru.
Yakki kun miseensa poolisii naannichaatinis ta’ee qaama birootin raawwatamuunsaa ragaadhan qoratamee osoo adda hin ba’in olola maqa balleessii duudhaa ummata naannichaa fi Poolisii Oromiyaarratti afaarfamaa jiru roga kamiinuu fudhatama hin qabu; itti gaafatamummaas ni hordofsiisa jedhaniiru.
Gochaan kamuu ummata jalaa waan hin miliqneef hawaasni qaama gochaa kana raawwates ta’ee gama kamiinuu keessatti hirmaate poolisiif eeruu kennuun dhugaan jiru qulqullaa’ee ariitiin seeratti akka dhiyaatu cinaa akka dhaabbatu Koomaandar Taayyeen gaafataniiru.